आज पनि घट्यो सुनको मूल्य ! - Lekbesi Khabar
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य !
काठमाडौँ: मंगलबार सुनको भाउ प्रतितोला ८ सय रुपैँयाले घटेको छ । अघिल्लो दिनभन्दा ८ सय रुपैयाँ घटेर मंगलबारका लागि सुनको मूल्य तोलाको १ लाख १ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
सोमबार तोलाको १ लाख २ हजार ४ सय रुपैयाँ थियो। त्यसअघि शुक्रबार सुन तोलाको १ लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेर सर्वाधिक मूल्यको रेकर्ड बनेको थियो। मंगलबारसम्म आइपुग्दा उक्त मूल्यमा १९ सय रुपैयाँको गिरावट आएको छ।
चाँदीको मूल्यमा केही दिनयता सामान्य घटबढ हुन थालेको छ। अघिल्लो दिनभन्दा ४० रूपैयाले बढ्दै मंगलबार चाँदी तोलाको १ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ। सोमबार १५ रुपैयाँले घटेर १ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ प्रतितोला थियो।
२७ श्रावण २०७७, मंगलवार १५:११ August 11, 2020
ट्रम्पकाे पत्रकार सम्मेलन स्थल बाहिर गोली चल्यो